ယနေ့ထိပ်တန်း သဒင်းများ.. rumor | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » ယနေ့ထိပ်တန်း သဒင်းများ.. rumor
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 21, 2013 in Gossip, Rumor |9comments
“တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ မြန်ကျင့်ပြည်နယ် တာဝန်ခံ အသစ်ခန့်အပ်…”
တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီမှ ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိသော ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၆၀၀၀၀ ကျော် ဒေသကို မြန်ကျင့်ပြည်နယ်အသစ် သတ်မှတ်ပြီး ယင်းဒေသ ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲအဖြစ် ဘွားဒေါ်ဂျီးအား ခန့်အပ်လိုက်သည်။ အသစ်ခန့်အပ်ခံရသော မြန်ကျင့်ပြည်နယ် ကူမြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲ ဘွားဒေါ်အနေဖြင့် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တရုတ်အစိုးရ အကြီးအကဲများထံမှ ဩဝါဒစကား နာခံရန် မကြာမှီ ပီကင်းမြို့တော်သို့ သွားရောက်ရန် ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဘွားဒေါ်မှ သည်လိုပြော “သားရယ် သီးခံလိုက်ပါကွယ်…”
မတ်လ၁၄ရက်နေ့က မီးပွိုင့်အချိန်မှီ စိမ်းမပေး၍ တပ်ချုပ်ကြီးမြေး ဖိုးလပျိ၏ အထိုးအကြိတ် နှိပ်စက်ခံရသော အင်းလျားလမ်း မီးပွိုင့် ယဉ်ထိန်းရဲသားအား တိုင်းပြည်ရေရှည်အကျိုး မျှော်ကိုး၍ သည်းညီးခံရန် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေး လွှတ်တော်ကော်မတီ ဥက္ကဌမှ နှစ်သိမ့်ဖြောင်းဖြ ပြောဆိုသည်။ နစ်နာဂျေးအဖြစ်လဲ ဖိုးလပြည့်ရေခဲချောင်း တချောင်းကျွေးရာ ၎င်းရဲသားမှ ရွှေပုဇွန်ရေခဲမုန့်စားပါရစေ ပြောသဖြင့် မယူချင်လဲနေဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဝမ်ပေါင်အရေး အစီရင်ခံစာအား ရန်ကုန်တိုင်းမှ ထောက်ခံသည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သတင်းထောက် ကြောင်ကြီးမှ စုံစမ်းရာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဟုတ်သွားကြောင်း…. ရန်ကုန်တိုမ်းစ်ဂျာနယ်ပါ ထောက်ခံကြောင်း ရေးသားချက်ကို မှားယွင်းခဲ့ဟန် တူကြောင်း၊ ဤတွင် ရန်ကုန်တိုင်း အန်အယ်လ်ဒီမှ ထောက်ခံ ကြေငြာချက် အလျင်အမြန် ထုတ်ခဲ့ရသည်။
ထိပ်တန်း သဒင်းများကို ထိပ်ဆုံးမှ ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ချင်…….
တကယ့် ထိပ်တန်း သတင်းတွေပါလားနော်
သူ့ထက် ထိပ်ရောက်တာ ဘာရှိသေးလဲဟင်
ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းလို့ လောလောလတ်လတ် ဘာပြောရမယ်မှန်းကို မသိသေးဘူး
ခေတ်မီစေရန် ကြောင်နေ့စဉ် သတင်းစာ ကို ဖတ်ရမယ်။ :harr:
အရိပ်ဖမ်းရင်း ဖတ်တွားဘာဂျောင်း …..။
လက်ပံတောင်းတောင်တွင်ဖြစ်နေသော အရေးအခင်းသည် ပညတ်မျှသာဖြစ်ကြောင်း .. တကယ်ဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း.. ဒေသခံများချစ်ကြသော တောင်ကြီးဆိုသည်မှာ.. ပညတ်ဖြစ်ကြောင်း.. မြေစိုင်ခဲတခုကိုကောက်ကြည့်လျှင်ပင်.. စွဲလမ်းခြင်းသဘော… မမြဲသည့်သဘောသိနိုင်ကြောင်း..အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညတ်ကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် အဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင် ပညတ်မရောက်အောင် သတိပြုနေရင် အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးဟု ကပ်ဖိရကြောင်ကြီးဆိုသူမှပြောရာ.. အနားရှိရွာသူတွဲ့တွဲ့မှောင်မှ.. ပညတ်တွင်ဝါးရင်းတုတ်အမည်တွင်သော်လည်း ပရမတ်အရ ဘာမှမရှိသော အရာနှင့်ရိုက်လိုက်ရာ.. ကွဲသွားကြောင်း..
ကွဲသွားသည်မှာ.. ပညတ်အရခေါင်းဖြစ်သော်လည်း.. အဆိုပါပညတ်ကို.. ပရမတ်အားဖြင့်နားမလည်သူများက.. ကြောင်ကြီးဂေါင်းကွဲသည်ပြောကြကြောင်း..
အမှန်မှာ.. ကြောင်ကြီးလည်းကွဲခြင်းမဟုတ်.. ဂေါင်းလည်းကွဲခြင်းမဟုတ်.. သွေးဟုပညတ်သော အရည်တချို့ထွက်ကျခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း..
ရိုက်သူတွဲ့တွဲ့မှောင်အား.. အရည်(သွေး)ထွက်သွားသူကြောင်ကြီးမှ. သီးခံရမည်ဖြစ်ပြီး.. တဆက်ထဲ နာမသန္တာန် မရောက်ရန်သတိထားသင့်ကြောင်း.. ထိုအခါအဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့တဲ့ ဉာဏ်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး.. ဉာဏံဥဒပါဒိဖြစ်မည်ဟု
ကိုယ့် အဖေ ကိုယ့် အမေ
ကိုယ့် ညီမောင် အမ အစ်ကို
ကိုယ့် မိန်းမ ၊ ကိုယ့် ယောက်ျား
ကိုယ် ကိုးကွယ်သော ဘုန်းကြီး
ကိုယ်နေသော အိမ် ၊ ရပ်ကွက်
ကိုယ် လုပ်သော စီးပွားရေး
ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ၁၀၀% ပတ်သက်သမျှ
အားလုံးကို ဘယ်သူလာ စော်ကားကား
ငြိမ်ခံ ရမည် ဟု ဆိုလျှင်